Minisitry ny Atitany: “Tsy mitanila ny mpiasam-panjakana amin’ny fifidianana” | NewsMada
Minisitry ny Atitany: “Tsy mitanila ny mpiasam-panjakana amin’ny fifidianana”
“Ny tena ijoroan’ny fitantanan-draharaham-panjakana tena tsy mitongilana atsy na ny aroa. Satria ny fikarakarana fifidianana ao anatin’ny tena fangaraharana tanteraka: tsy misy tsy ara-dalàna na kely aza.”
Io ny nambaran’ny minisitry ny Atitany, Razafimahefa Tianarivelo, tamin’ny famoriana ireo lehiben’ny faritra sy ireo prefet teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, taorian’ny fivoahan’ny tetiandrom-pifidianana filohan’ny Repoblika.
Voalazan’ny didy aman-dalàna fa tsy mahazo mitanila izay tomponandraiki-panjakana rehetra. Mba hoeken’ny vahoaka malagasy rehetra ny fifidianana ary tsy hisy olana sy tsy hiverina intsony ny krizy aorian’ny fifidianana.
Tanjona ny hoe mba mijoro ho tsy mitanila tokoa ny mpitantana ny raharaham-panjakana amin’ny lafintany rehetra. Izay no antony nampiantsoana azy ireo. Teo koa ny fampahatsiahivana ny lafiny lalàna rehetra tokony hohajaina sy ny pitsompitsony amin’ny fanarahan-dalàna.
Avy amin’ny vahoaka ny fahefana
“Mino sy manantenana aho fa hangarahara ny fifidianana. Izay no antony nampivoriany ny lehiben’ny faritra sy ny prefet”, hoy izy. Ary tsy maintsy mbola handeha hidina any amin’ny faritra rehetra hampita ny hafatra izy.
Raha tiana ny hahatongavana any amin’ny fifidianana tena mangarahara sy hoe eken’ny rehetra, tsy maintsy mijoro ny solontenam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana amin’izay tsy fitongilanana izay. Izay koa no tena antom-pisian’ny mpiasam-panjakana.
Tsy tokony hohadinoina fa fahafena avy amin’ny vahoaka no ampindramina amin’ny solontenam-panjakana. Fifidianana madio sy mangarahara ary eken’ny rehetra no hetahetan’ny vahoaka. Noho izany, tsy maintsy manatanteraka izany ny mpiasam-panjakana.